Byare January 11, 2018
(Europe) 11 Jan 2018. Suuqa kala iibsiga ciyaartoyda ayaa dib u furmay isagoona socon doona bishan oo idil, Waxaan si joogta ah idin kugu soo gudbin doonaa ciyaartoyda la doonayo iyo kuwa lala saxiixday intaba insha’alaah.
Haddaba Aqriso wararka xanta ay saakay oo Khamiis ah wargeysyada ka qoreen Suuqa kala iibsiga:
Everton ayaa ku soo biirtay tartanka loogu jiro saxiixa weeraryahanka Arsenel ee Theo Walcott. 28-jirka reer England waxaa sidoo kala doonaya kooxdiisii ugu horreysay ee Southampton, Gunners ayaana ku dooneysa ku dhawaad 30-milyan. (Liverpool Echo)
RB Leipzig ayaa xiddigeeda qadka dhexe ee Naby Keita u ogolaan karta inuu ku biiro Liverpool bishan. Reds ayaa kol horeba ogolaatay heshiis 48-milyan ay xagaaga kula soo wareegeyso 22-jirka reer Guinea, laakiin waxaa la arkaa inay helaan isla bishan iyagoo bixinaya beeso dheeraad ah 15 ilaa 20 milyan oo euro. (Bild)
Tababaraha xulka Republic of Ireland Martin O’Neill ayaa lagu waday inuu shalay la kulmo saraakiisha Stoke Citysi ay uga hadlaan xilka tababaranimo ee kooxda ka banaan, kaaliyihiisa Roy Keane ayaa sidoo kale la filayaa inuu la soo dhaqaaqo haddii uu xilkaasi qabto. (Irish Independent)
Guangzhou Evergrande ayaa sheegtay inaysan dagaal kula gali doonin kooxda Beijing Guoan ee kala dhisan horyaalka Shiinaha sidii ay u heli lahayd adeega 28-jirka reer gabon ee weerarka kaga ciyaara Borussia Dortmund ee Pierre-Emerick Aubameyang. (ESPN)
Tottenham ayaa wada hadalo aan rasmi ahayn la bilowday xiddigeeda qadka dhexe ee Del Alli. Waxaa la sheegay in kooxdu ay kalsooni ku qabto inay heshiis cusub la gaarto 21 jirka reer England. (Daily Mirror)
Guddoomiye ku xigeenka Fulham Tony Khan ayaa sheegay in Bishan aan la iibin doonin 17-jirka reer England ee garabka kaga ciyaara kooxdiisa iyadoo ay jirto xiisaha kaga imaanaya Manchester United iyo Tottenham. (Daily Telegraph)
Manchester United ayay tahay inay bixiso 27-milyan oo bound si ay 22-jirka qadka dhexe ee reer Belgium Leander Dendoncker ay Bishan kala soo saxiixato Anderlecht. (Manchester Evening News)
Xiddiga qadka dhexe ee Real Madrid Dani Ceballos ayaa ku wargaliyay kooxda inuu doonayo inuu ka tago, Liverpool ayaa la warinayaa inay dooneyso 21 jirka reer Spain. (Diario Gol)
Daafaca Barcelona Gerard Pique ayaa uga digay Manchester United iyo saaxiibkii Daafaca kala ciyaara ee Samuel Umtiti uu kooxda sii joogi doono sanado badan. 24-jirka reer France ayaa qandaraaskiisa lagu bur burin karaa 55 milyan oo bound. (Metro)
Dhanka kale, Catalans ka ayaa qarka u saaran inay la soo saxiixdaan daafaca Palmeiras ee Yerry Mina. 23 jirka reer Colombia ayaa Barca u saxiixi doona heshiis shan sano iyo bar ah. (Radio Catalunya)
Waxaa lagu badeli doonaa 33-jirka reer Argentina ee Javier Mascherano kaa oo la filayo inuu ku biiro kooxda ka dhisan Shiinaha ee Hebei China Fortune. (Goal)
Xiddiga qadka dhexe reer Germay ee naadiga Juventus Sami Khedira 30-jir ayaa sheegay inuusan dooneyn inuu ka ciyaaro horyaalka MLS dalka Mareykanka isla markaana uu doonayo inuu sii joogo Turin. (Gazzetta dello Sport)
Crystal Palace ayaa dhammaadka usbuucan dhammeystiri karta saxiixa weeraryahanka reer Senegal ee kooxda West Ham Diafra Sakho, 28-jir. (Daily Mirror)
Huddersfield ayaa ogolaatay heshiis 14-milyan ay Norwich kala soo saxiixaneyso xiddiga garabka ka ciyaare ee Alex Pritchard, 24-jir. Laacibka reer england ayaa Tottenham uga soo tagay 8 milyan xagaagii 2016. (Daily Mail)
West Ham ayaa loo sheegay inay bixiyaan 15 milyan si ay u helaan xiddiga qadka dhexe ee reer Republic of Ireland iyo Bournemouth Harry Arter, 28-jir. (Daily Mirror)
Best Friends: Shanta ciyaaryahan ee saaxiibada dhabta ah.....(Ronaldo iyo?)
Messi waa CADOWGA ugu xun ee Laacibkan....Wuxuuna doonaya in kooxda laga Ceyriyo!!